Dreams Khabar मासु खाएपछि आधा घन्टा श्रम गर्न डाक्टरको सुझावः
मासु खाएपछि आधा घन्टा श्रम गर्न डाक्टरको सुझावः
दशैंमा माछा मासुबाट बन्ने परिकारको अत्यधिक खपत हुन्छ । सप्तमीदेखि मासु खान सुरु हुन्छ र यो क्रम दशैंभरी चल्छ ।तर, दशैंमा मासु सेवन गर्दा होस र्पुयाउनु पर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् । अत्यधिक बोसोयुक्त मासुको सेवनले कलेजोलाई हानी गर्न सक्ने उनीहरुको चेतावनी छ ।
तथापि, दशैको समयमा शारीरिक परिश्रम कम हुने भएकोले पनि चिकित्सकहरु माछाको बढि सेवन गर्न सल्लाह दिन्छन् । किनकी उच्च प्राटिनयुक्त माछामा बोसोको मात्रा कम हुन्छ । अन्यथा चाडपर्वमा अत्यधिक मासुको सेवनले शरीरमा फ्याट बढाउँछ । जसले गर्दा कलेजो विग्रन सक्छ ।
‘पहिल्यैदेखि कलेजोको समस्या भएका व्यक्तिको दशैंमा कुनै न कुनै भाग अवश्य नै बिग्रिएको हुन्छ,’ वीर अस्पताल लिभर (कलेजो) यूनिट प्रमुख डा. अनिल कुमार मिश्र भन्छन् ।
दशैंको समयमा घरैपिच्छे आफन्तहरुको जमघट हुने गर्छ । यस्ता जमघटमा मदिराको साथमा खसी तथा बोकाको टाउको, फोक्सो, आन्द्रा, कलेजो, छालालगायत पेटभित्रका अंगहरु बढि रुचाइन्छन् । जबकी चारखुट्टे जनावरमा सबैभन्दा धेरै बोसो जम्मा हुने भनेकै यिनै भागमा हो ।
बोसोयुक्त मासुले तत्काल समस्या नल्याए पनि दीर्घकालीन रुपमा भने उच्च कोलेस्ट्रोल, उच्च रक्तचाप, मुटु रोग लगायतका समस्या निम्त्याउन सक्ने अर्का कलेजो रोग विशेषज्ञ डा. अनन्त श्रेष्ठ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘एक दिन खाँदैमा यसले खासै समस्या निम्त्याउँदैन । तर धेरैपटक यस्तो मासुको सेवनले भने दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्छ ।’
रातो मासुमा स्याचुरेटेड फ्याटको मात्रा धेरै हुन्छ । यस्ता फ्याटले कलेजोको समस्या निम्त्याउनुका साथै उच्च कोलेस्ट्रोल, युरिक एसिड तथा मुटु सम्बन्धि समस्यासमेत नित्याउने गर्छ । मदिराजन्य पदार्थको सेवनले पहिले नै कलेजो तथा मुटुको भित्री नलीमा क्षति र्पुयाइरहेको हुन्छ ।
क्षति पुगेको भागमा बोसो जमेको खण्डमा त्यस्ता व्यक्तिहरु हृदयाघातको शिकार हुने सम्भावना पनि उच्च हुन्छ डा. मिश्रको भनाइ छ । यही कारणले गर्दा दशै, तिहारको समयमा वीर अस्पतालमा यस्ता समस्या लिएर आउने विरामीको संख्या उल्लेख्य हुने गरेको उनले बताए ।